Sports – Page2– सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
काठमाडौं । अन्तरविद्यालय छात्र भलिबल प्रतियोगिता प्रथम माउन्ट ओलिभ कपमा भ्यालिपब्लिक स्कुलले च्याम्पियनपीप हात पारेको छ । मंगलबार भएको फाइनल खेलमा लुभूको भ्यालीपब्लिकले आयोजक माउन्ट ओलिभलाई २३–२५, २५–१८, २५–२० र २५–२० को सोझो सेटमा हराउँदै च्याम्पियन बन्ने अवसर पाएको हो । ललितपुरको सानागाउँस्थित आयोजक माउन्टओलिभको कोर्टमा तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा आयोजक ‘बी’ले लुभू मा.वि.लाई […]
काठमाडौं । १२औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) को उपाधी मुम्बई इन्डियन्सको पोल्टामा परेको छ । राजीव गान्धी इन्टरनेसनल स्टेडियममा डिफेन्डिङ च्याम्पियन चेन्नई सुपरकिंग्सलाई एक रनले पराजित गर्दै मुम्बई चौथो पटक फरि आईपीएल च्याम्पियन बन्न सफल भएको हो । सन् २००८ बाट सुरु भएको आईपीएलमा मुम्बईले क्रमशः २०१३, २०१५ र २०१७ मा लगातार उपाधी हासिल […]
काठमाडौं । आउँदो महिनादेखि इङ्गल्यान्ड र वेल्सको संयुक्त आयोजनामा पुरुष विश्व कप क्रिकेटका लागि छनौट १० वटै राष्ट्रहरु सहभागी हुुने भएका छन् । ती देशहरुले आाफ्ना टिमहरु घोषणा पनि गरिसकेका छन् । यो वर्षको विश्वकप नयाँ र चर्चामा आएका खेलाडीहरुका कारण क्रिकेट रंगशालामा नयाँ र युवा दर्शकहरुको ताती लागने बताइएको छ ।भारतका जस्प्रीत बुमराह, अफगानिस्तानका […]
काठमाडौं । उसै त गर्मीको बेला । त्यसमा पनि खेलकुद स्थल नेपालगन्ज । यहाँको औसत तापक्रम ३८ डिग्री नाघिसकेको छ । तर पनि खेलाडीहरु निकै गरम जोशीका साथ प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । खेल जित्नु थियो । के स्वाद् ? उद्घाटन न समापन ! आफैमा यो देशको गौरव र प्रतिष्ठासँग जोडिएको बृहद आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता । […]
Posted in: २०७४–चुनाव, mainNews, Sports
स्पेशल ओलम्पिक गेममा सहभागी नेपाली टोली घर फर्किएको छ । युएईमा भएको स्पेशल ओलम्पिक समर वल्र्ड गेम्सका पदक विजेतासहितको नेपाली टोली शुक्रबार नै घर फर्किएको हो । मार्च १४ देखि २१ तारिखसम्म युएईमा भएको फरक क्षमताका व्यक्तिहरुको खेलहरुमध्ये नेपालले एथ्लेटिक्स, बोसी र फुटसलमा सहभागिता जनाएको थियो । सहभागिता जनाएको खेलहरुमा नेपालले एथलेटिक्समा १ स्वर्ण र […]
काठमाडौं । महिला विश्वकप क्रिकेटको एशिया छनौटअन्तर्गत नेपालले अहिले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)सँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । थाइल्याण्डको ट्रेडथाई क्रिकेट मैदानमा नेपालरिुद्ध टस जितेर पहिले ब्याटिङ पाएको युएईले नेपाललाई ४२ रनको चुनौती दिएको छ । युएईविरुद्व जित निकाल्दै प्रतियोगितामा उत्कृष्ट पुनरागमन गर्ने अवसर नेपाललाई प्राप्त छ । अघिल्लो महिना थाइल्याण्डमै भएको टी–२० स्म्यास प्रतियोगितामा नेपालले […]
काठमाडौं । आईसीसी महिला विश्वकप एसिया क्षेत्रको छनोट खेलमा नेपाली महिला टिमले सफल सुरुआत गरेको छ । छनौट खेल थाइल्यान्डको बैंककस्थित ट्रेडथाई क्रिकेट मैदानमा भएरहेको छ । मंगलबार भएको पहिलो छनौट खेलमा खेलमा नेपाली टिमले मलेसियाली टिममलाई ३४ रनले पराजित गर्न सफल भएको छ । नेपाली टिमले दिएको १२७ रनको लक्ष्य पछ्याउँदै मलेसियाली टिम निर्धारित […]
काठमाडौं । आठौं विश्व पारा तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपमा नेपालका विक्रम श्रेष्ठले कास्य पदक जितेका छन् । बुधबार (आज) बिहान टर्कीमा भएको च्याम्पियनसिपमा श्रेष्ठले पुरुषको पि–३२ विधातर्फ एकल पुम्सेमा कास्य जितेका हुन् । च्याम्पियनसिपमा मोरक्कोका खेलाडी बिलाल एक खात्ताबियालाई अंकका आधारमा हराएर श्रेष्ठ सेमिफाइनलमा पुगेका थिए । सेमिफाइनलमा उनी रुसका आन्द्रि ग्राभोभास्कीसँग पराजित भएको प्रशिक्षक कविराज नेगी […]
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले यूएईसँगको एक दिवसीय र टी–२० सिरिज जितेपछि सरकारले क्रिकेट टोलीका सदस्यहरुलाई जनही ५–५ लाखसहित सम्मान गर्ने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पहिलो पटक एक दिवसीय र टी–२० सिरिज जितेर स्वदेश फर्किएको टोलीलाई यस्तो सम्मान गर्ने निर्णय गरेको हो । दुवै सिरिजम २–१ को जित हात पार्दै स्वदेश […]